Counter-Strike Nhoroondo Yeshanduro ► Counter Strike 1.6 Download
Counter-Strike ndiwo wekutanga munhu kupfura nekutarisa pakushanda pamwe nezvinangwa. Magandanga uye Counter-Magandanga akatarisana muhondo.
Makwikwi emitambo sarudzo anosanganisira:
Kununura kana kudzivirira nhapwa.
Kudyara kana kuderedza bhomba.
Kuwana nzvimbo yekudyara bhomba.
Vatambi vanopihwa mu-mutambo mari kushandisa pane zvombo zvine simba zvakanyanya zvichienderana nekuita kwavo pakupera kwekutenderera kwega.
Hafu-Hupenyu mod Counter-Strike yakatanga kuburitswa muna 1999. Kubva payakatanga kubuda beta, Counter-Strike yakagadzira hwaro hwevateveri vakazvipira kutamba mutambo uyu nechitendero kweanopfuura makore gumi.
Kubva 1.6 kuenda kuSource kuenda kuGlobal Offensive, Counter-Strike wakashanda semupimo wekuyera kugona kwemutambi. Mumakwikwi pasi rose, zvikwata kubva pasi rese zvinoratidzira hunyanzvi hwazvo nemazano. nyanzvi Counter-Strike vatambi vari kuita mukurumbira munharaunda yemitambo yepasirese.
Muchikamu chino, tichatsanangura nhoroondo yeumwe neumwe Counter-Strike Mutambo!
Counter-Strike: Inogumbura Pasi Pose
Muna 2012, Valve yakazounza mutambo mutsva: Counter-Strike: Inogumbura Pasi Pose, iyo yakabva yava imwe yemitambo yemavhidhiyo yakakurumbira. Iyi vhezheni ye Counter-Strike: Global Offensive yakaburitswa neinjini nyowani yakagadzira zvakare mutambo uye kuita matchmaking. Hazvishamisi kuti parizvino inokwezva vangangoita mamirioni gumi nerimwe evatambi pamwedzi, vachitora chikamu mumakwikwi anotsigirwa neValve uye zviitiko.
Nzira dzekutamba dze Magandanga uye Counter-Magandanga Kudzivirira kurwisa kwemagandanga kana kununura nhapwa ndiko kwanyanya kutekeshera. Kune mapfumbamwe emitambo mhando, kusanganisira yehondo royale uye yemakwikwi modhi.
Matchmaking inoita kuti vatambi vatambe pane anti-cheat maseva. Tamba pamamepu akagadzirwa nevashandisi. Mabhoti anowanzo kutsiva vatambi vechikwata uye vavengi. Matehwe akagadzirwa nemushandisi anoonekwa mumabhokisi ehupfumi, nevagadziri vachigamuchira kucheka. Kubhejera uye hupfumi hwekubheja hwakaumbwa mumutambo. Global Zvinogumbura kurova kukuru kweValve (kana isiri iyo inonyanya kufarirwa).
Development: Yakavanzika Nzira Ent. & Valve
Mutambo zvishoma zvinodiwa:
CPU: Intel® Core™ 2 Duo E6600 kana AMD Phenom™ X3 8750 processor kana zvirinani
Vhidhiyo CARD: Vhidhiyo kadhi inofanira kunge iri 256 MB kana kupfuura uye inofanirwa kunge iri DirectX 9-inoenderana nerutsigiro rwePixel Shader 3.0.
YEMAHARA DISKI NZVIMBO: 15 GB
YAKAPIWA VIDEO vhidhiyo RAM: 256 MB
Game kurudzira zvinodiwa:
apo Counter-Strike 1.6 yakaburitswa muna 2004, yaive shanduko yezita rekupedzisira re Counter-Strike mazita update. Asi chisingazivikanwi nevanhu vakawanda ndechekuti nhasi uno CS 1.6 rakasiyana chaizvo nekuburitswa kwekutanga!
Mutambi anogonawo kuwedzera CT Shield (riot shield) panguva ino. Aztec, Airstrip, uye Inferno zvose zvakapiwa jasi idzva repende. Vatambi vemhando dzechikoro chekare vakafara kuwana a widescreen mode izvo zvakaita kuti gameplay inakidze!
Zvimedu zvitsva zvekukanganisa / kubhomba Bhomba (C4) in CS 1.6 yakasiyana neyokutanga beta vhezheni, uye chikamu ichi chainakidza kune vakawanda vatambi (kusanganisira ini!)
The chepakutanga Counter-Strike yakagadziridzwa zvakare uye yakagadziridzwa uchishandisa iyo nyowani sosi injini. Nekuda kweizvozvo, vatambi vazhinji vakaramba vakavimbika kune 1.6 vhezheni yemutambo, saka isu hatigone kushandura kune nyowani. Counter-Strike: Kwakabva.
Development: Valve Corporation, Turtle Rock Studios. Apo Valve yakatanga kuburitsa "CS 1.6” kukwidziridza seshanduro yebeta muna Ndira 16, 2003, vakaidana kuti “CS 1.6 Beta."
Mutambo zvishoma zvinodikanwa:
CPU: Intel Pentium 4 processor (3.0 GHz, kana zvirinani)
Vhidhiyo KADHI: DirectX 8.1 level Graphics Card
KADZIMA KADHI: Hongu
YEMAHARA DISKI NZVIMBO: 4.6 GB
YAKAPIWA VIDEO vhidhiyo RAM: 64 MB
CPU: Pentium 4 processor (3.0 GHz, kana zvirinani)
Vhidhiyo KADHI: DirectX 9 level Graphics Card
YAKAPIWA VIDEO vhidhiyo RAM: 128 MB
November 1, 2004, yakaratidza kusunungurwa kwe Counter-Strike: Kunobva, kukwidziridzwa kukuru kwetekinoroji, uye kuzorodza kwe Counter-Strike kodzero. Nekuda kwekusiyana kukuru pakati pekudzokororwa kuviri kwe Counter-Strike, vatambi vazhinji vanoramba vachisarudza yekutanga Steam kuburitswa. Mavhezheni ese ari maviri achiripo nhasi.
Zvose ndezvekuzadzisa mepu. Chinangwa ndechekukunda chimwe chikwata mumaraundi. Chiitiko chinodzikisira huroyi, uye kupfura negonzo kunokonzeresa kudzoreredza. Nekuti reticle yemutambi hairatidze iyo chaiyo bullet maitiro, vanotanga vanogona kunanga zvakanyanya. Bara rinorova musoro ndiro rinouraya zvakanyanya.
Kudzora kwezvombo uye maitiro egirinedhi akachinjwa. Kusvuta magirinedhi kupararira zvishoma nezvishoma kupfuura Counter- Strike's, uye flashbangs inobhururuka zvakasiyana. In Counter-Strike: Kwakabva, kufaira makabati anopindirana. Counter-Strike: Recoil yekwakabva haina kunyatsojeka. Iyo sosi inowedzera ragdoll fizikisi.
Pasinei nekukanganisa kwayo, Mamiriro Zero uye Kwakabva vaitsoropodza mukuona kuti Valve yaive neruzivo rwese rwavaida vasati vaburitsa mupfuri wepamhepo wevazhinji vakawanda, Counter-Strike: Global Offensive, muna 2012. Hazvishamisi kuti Global Offensive inoramba iri imwe yemazita anozivikanwa zvikuru paSteam.
Kunyange kana ari kukura, the Global Zvinogumbura ichine zvakawanda zvekupa vatambi vemazera ese uye nhanho dzehunyanzvi. IGN's Best of 2017 awards, Golden Joystick Awards, uye 2017 Game Awards zvose zvakasarudzwa kwaari muna 2017. National Academy yevaongorori vemutambo wevhidhiyo yakagadzirirwawo kwaari muna 2017. Inokodzera shanduro yakabudiswa makore matanhatu apfuura.
Mutambo une mukurumbira uye unozivikanwa wakagadziridzwa kumakwikwi eSports uchiramba uri mudiwa wevateveri pakati pevatambi nevaoni. Nekuda kweizvi, yakanyatsokodzera World of Duels. -
Valve neSierra Entertainment yakaburitswa Counter-Strike: Condition Zero ndeyekutanga-munhu kupfura.
TagsAbout kaunda counter strike counter strike 1.6 download counter strike download counter strike mhando counter strike shanduro counter strike versions list Counter-Strike: Condition Zero Counter-Strike: Inogumbura Pasi Pose Counter-Strike: Kunobva cs cs 1.6 download budiriro Mutambo zvishoma Game kurudzira Gameplay History vatambi zvinodiwa sitiraiki Versions
Counter-Strike 1.6 Crosshair Ruvara
Download Counter-Strike 1.6 yeMahara paPC